Renderforest: Real-Time Video Editing na Animation Templates Online | Martech Zone
Anyị na-ebupụta usoro ajụjụ ọnụ ọhụụ ga - eme ka ebe a na - azụ ahịa teknụzụ azụmaahịa site na enyemaka nke Creative Zombie slọ nka. Anyị ẹdude Podcast na Edge nke Web Radio dị ịtụnanya na ikuku mpaghara na Indianapolis na ehihie Satọdee na Nnwere Onwe 95… mana oge ụfọdụ anyị kwesịrị igwu omimi na talent anyị chọrọ ịjụ ajụjụ ọnụ.
Site na egwu egwu sitere na otu ndị enyi, Brad na ndị otu ya jikọtara ọnụ Intro maka ihe ngosi ahụ. Otu atụmatụ dị irè na Edge nke Weebụ na-etinye vidiyo na Youtube nke ihe nkiri ahụ ka anyị wee mee nke ahụ. Achọrọ m itinye vidio vidio maka ihe nkiri ahụ mana ọ kwadoghị ịpụ na ị nweta ndị otu egwuregwu. Obi dị m ụtọ, m natara ozi ntaneti sitere na ikpo okwu ọhụrụ - Ugbo ala - ndị nwere ezigbo edezi vidiyo na ntanetị!
Anyị ejirila ngwaahịa vidiyo saịtị iji nweta vidiyo na-enweghị eze, vidiyo eserese, na ntụgharị tupu - mana anyị ka kwesiri ịma etu esi edezi ma mepụta vidiyo ahụ n'onwe anyị. Anyị hụrụ ndị ọrụ anyị n'anya nwere ike idezi ma mepụta vidiyo anyị. Mana nke a abụghị nchekwa data clip ma ọ bụ ọrụ, ọ dị ntakịrị n'etiti. Renderforest nwererịrị narị narị ndebiri vidiyo ịhọrọ site na ha ma hazie ha n'ịntanetị ma kwụọ ụgwọ mgbe ịchọrọ ibudata ụdị nkọwa dị elu.
Nanị bulite foto gị, dezie ederede ma lelee vidiyo gị na nkeji. Ugbo ala na-enye ụdị vidiyo dị iche iche dị elu, gụnyere ezinụlọ, agbamakwụkwọ, ma ọ bụ slideshows njem, vidiyo vidiyo ụmụaka, valentine ma ọ bụ vidiyo ịhụnanya, nkwado ma ọ bụ vidiyo azụmaahịa ụlọ ọrụ, akwụkwọ ịkpọ oku mmemme, ihe ngosi na-akọwa, vidiyo vidiyo azụmaahịa, ihe ngosi nka, usoro ihe atụ, na ndị ọzọ.
Ugbo ala Njirimara onye na-eme ihe nkiri na ihe ngosi mmịfe ntanetị na nchekwa igwe ojii n'efu maka vidiyo niile ịtụnanya ị mepụtara. Ha nwere ọtụtụ narị ndebiri ndebiri dị ugbu a na saịtị ahụ ma ọ dị nfe nke dị mfe iji gbanwee nke ọ bụla n'ime ha site na ịdezi ederede ma ọ bụ bulite onyonyo ịchọrọ iji. Ana m etinye njikọ njikọta anyị na post a ka nwalee ha!
Ina Amalite na Renderforest
Tags: 3d vidiyonkịtị videovideo ngwanka videonwa videovidiyo vidiyoụbọchị ọmụmụ videoakwụkwọ vidiyoKrismas videodị ọcha videovidiyo vidiyoụlọ ọrụ vidiyoụlọ ọrụ vidiyoike videoihe omume vidiyonkọwa videooke vidiyovideo ezinụlọewepụghị videonri vidiyommụọ ikeịhụnanya videoVidio Ahịavideo nchekwantakiri videovideo mkpanakaoge a videovideo ngagharịedezi vidiyo na ntanetịndebiri vidiyo na ntanetịọzọ videovideo urividiyo vidiyokwuru vidiyoezi uche videona-eme vidiyona-eme mkpọtụvidiyo vidiyoọrụ vidiyomfe videoanwụrụ vidiyoelekọta mmadụ videokwụsị vidiyona mkpado videomgbanwe videonjem vidiyommiri vidiyoagbamakwụkwọagbamakwụkwọ video
Feb 26, 2015 n’elekere 10:33 nke abali
Nke a bụ ezigbo azịza maka ndị nwere nnukwu ego. Ma gịnị banyere voiceover? Needkwesịrị ịzụta nke ahụ iche?
Feb 27, 2015 na 1:10 PM
Ekwere m ya. Enwere olu dị oke ọnụ na saịtị ebe ahụ. Aga m ahụ ma m nwere ike nweta ndepụta ọnụ!